जब्दीघाटको पुल मर्मतमा ढिलाइ : RajdhaniDaily.com
Homeअर्थजब्दीघाटको पुल मर्मतमा ढिलाइ
२०७४ सालमा बाढीले भासिएको पुल अझै उस्तै
काठमाडौं । सडक विभाग र पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको बदमासीकै कारण अहिलेसम्म बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीमा बिग्रिएको पुल मर्मतको काम हुन सकेको छैन । २०७४ सालको २८ र २९ साउनमा आएको भीषण बाढीले भासिएको पुल अहिलेसम्म मर्मत नगरिँदा त्यहाँका स्थानीय निकै कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भइहेका छन् ।
अहिले त्यहाँका स्थानीयवासी सोही बिग्रिएको पुलबाट नै जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् भने केहीले वर्षाको भेलसँगै उर्लिएको बबई नदीमा पसेर दैनिक ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । स्थानीयवासी जतिसक्दो छिटो यस पुल निर्माण भइदिए आफूहरूको कष्टकर यात्रा सहज हुने बताइरहेका छन् ।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने यस पुल निर्माण गराउन विगत लामो समयदेखि स्थानीय र जनप्रतिनिधिले चौतर्फी दबाब दिँदै आएका छन् । पप्पु कन्सट्रक्सनले निर्माण गरेको पुल भासिएपछि अहिलेसम्म उत्तर दक्षिण जोड्ने दुई नगरपालिकाबीच यातायात सम्पर्क हुन सकेको छैन ।
यो पुल निर्माणका लागि आव २०६७-६८ मा सम्झौता भएर २०७३-७४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । करिब डेढ वर्ष ढिला गरी निर्माण गरिएको पुल हस्तान्तरण नहुँदै भासिएको थियो । करिब ४ सय २५ मिटर लम्बाइ यस पुलको लागत १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । निर्माणपछि पुल हस्तान्तरण नहुँदै भासिएपछि सडक डिभिजन आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीच केही समय आरोपप्रत्यारोपसमेत भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले यो पुल २०७३ सालको २१ असारमा नै निर्माण सम्पन्न गरेको बताएको थियो ।
करिब ४ सय २५ मिटर लम्बाइ भएको यस पुलको लागत १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले २०७३ सालको २१ असारमैै निर्माण सम्पन्न गरेको पुल निर्माणपछि हस्तान्तरण नहुँदै भासिएको थियो
पुल निर्माणमा संलग्न निर्माण कम्पनी पप्पु कस्ट्रक्सनले बाढीले बिगारेको पुल अहिलेसम्म मर्मत नहुनुमा सडक विभाग र पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबीचको आपसी विवाद नै मुख्य कारण भएको बताएको छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार विभाग र संस्थानबीच ३९ लाख रुपैयाँमा पुल मर्मतका लागि डिजाइनको नक्सा बनाउने सम्झौता भए पनि पहिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले डिजाइन दिन नमानेको र अहिले आफूहरूले स्विस एक्सपर्टसँग डिजाइन गराई गत २३ मंसिरमा नै स्वीकृतिका लागि पठाउँदा पनि अझैसम्म विभागले स्वीकृत नगरिदिएकाले ढिलाइ भएको हो ।
निर्माण कम्पनी पप्पुले बिग्रिएको पुल मर्मत गर्न आफूले हाल ५० लाख लगानीमा आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री सोही ठाउँमा पु¥याएर राखेको र एक्सपर्टमार्फत दिएको डिजाइन स्वीकृत हुनेवित्तिकै काम अघि बढ्ने बताएको छ । सो कम्पनीले पुल भासिनुमा सडक विभागको गलत डिजाइन र सुधारमा कमजोरी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । चार वर्षअघिको बाढीले यस पुलको १५ नम्बर पिलर भासिएर क्षति पुगेको थियो । सो पुलमा भएका कुल १७ वटा पिलरमध्ये बाढीले १५ नम्बरको पिलरलाई असर पारेको थियो ।
करिब ४ सय २५ मिटर लम्बाइको यस पुल निर्माणको लागत १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सो लागत रकममध्ये केही रकम लिए पनि अझै धेरै पैसाको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
विभागले अहिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत इन्द्रप्रसाद आचार्यको आफ्नै निजी कन्सल्टेन्सी सेवा जिओ टेक्निकल एन्ड एसोसियटलाई बोलपत्र टेन्डर नगरी सिधै पेटीमा काम लगाएको थियो । जिओ टेक्निकल एन्ड एसोसियटका सञ्चालक प्राडा इन्द्रप्रसाद आचार्य हुन् । उनी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्राविधिक कन्सल्टेन्सी छनोट समिति र यस जिओ टेक्निकल एन्ड एसोसियटका सञ्चालक पनि भएकाले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच अहिले यो प्रकरणले निकै चर्चा पाएको छ । सम्बन्धित सरोकारवालाले छनोट गर्ने र काम गर्ने एउटै व्यक्ति हुनु निकै बदमासीपूर्ण काम भएको बताउँदै आएका छन् ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको रिपोर्टको सम्बन्धमा भौगोलिक अध्ययनका लागि तीनवटा पिलरको जग (पाएर नम्बर ३, ८ र १२) मा २४ मिटर गहिराइको बोर होल गर्ने कार्य पेटी ठेक्कामा पुलचोक अध्ययन संस्थानले निजी कम्पनी जिओ टेक्नीकल एन्ड एसोसियटलाई माटो परीक्षणको जिम्मा दिएको देखिन्छ ।
जिओ टेक्निकल एन्ड एसोसियटजस्तो निजी कम्पनीलाई यस्तो जटिल परीक्षण पेटी ठेक्कामा दिने सम्झौता गरिएसँगै सडक विभागले पुलचोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग गरिएको सम्झौता भंग भएको देखिएको सम्बन्धित स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार निर्मार्णाधीन पुलको पाइल (पुलमुनि जगको खम्बा)को लम्बाइ पत्ता लगाउन ढलान प्वाल पार्ने मेसिन प्रयोग भएको देखियो । यस्तो प्रविधिबाट विश्वमै अहिलेसम्म पाइलको गहिराइ पत्ता लगाउन प्रयोग भएको नजिर भेटिएको छैन । यहाँ भने सोही कार्य पाएर नम्बर ११ र १४ मा गरेको देखियो । तर, बाढीले धसिएको १५ नम्बर पाइर (जग)मा कुनै प्रकारको परीक्षण गरेको देखिँदैन ।
सम्बन्धित सरोकारवालाका अनुसार जब्दीघाटको बबई नदीमा भासिएको पुलका कुल १७ वटा पिलरमध्ये ११ देखि १६ नम्बरसम्मको पिलर परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउन विभाग र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबीच ३९ लाख रुपैयाँमा काम गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताबमोजिम १५ नम्बर पिलरलाई परीक्षण नै नगरी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राविधिकले ११ र १४ नम्बरको पिलरमा मात्र परीक्षण गरी हजुवाको भरमा विभागलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो । अहिले सो सम्झौताअनुसारको काम पूरा नभएको भन्दै महालेखाले ३९ लाख रुपैयाँ बेरुजु नै राखेको अवस्था छ ।
सोही विषयमा जिज्ञासा राख्दा सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले एक साताअघि पनि यस पुल मर्मतको काम अघि बढाउनेबारेमा छलफल भएको बताए । उनले निर्माण कम्पनीमार्फत एक्सपर्टहरूले गरेको अध्ययन र प्रतिवेदन एवं सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित कम्पनीले नै बनाउने भनिएको बताए ।
विभागका पुल महाशाखा प्रमुख एवं उपमहानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले सम्झौताबमोजिम बिग्रिएको पुल निर्माण सम्पन्न गरी बुझाउनुपर्ने जिम्मा पप्पु कस्ट्रक्सनकै भएकाले अब मौसम अनुकूल भएपछि (वर्षा सकिएपछि) काम सुरु हुने बताए । यस पुलका बारेमा विशेष अदालतमा मुद्दा पनि भएकाले केही ढिलो भएको भन्दै उनले अब छिटै काम अघि बढ्ने बताए ।
डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका आयोजना प्रमुख रामकुमार देवले पनि भासिएको पुललाई अब के कसरी ? बलियो किसिमले बनाउने भन्नेबारे सडक विभागबाट स्वीकृत गराई ल्याएपछि काम अघि बढ्ने बताए । उनले यसअघि मर्मतको डिजाइन पेस गर्न भनिएकोमा अझैसम्म पप्पुले डिजाइन पेस गर्न नसकेको जानकारी गराए । अब कस्तो किसिमले मर्मत गर्ने हो ? सोही खालको डिजाइन विभागबाट स्वीकृत भएपछि काम सुरु हुन सक्ने उनको भनाइ छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सने भने सडक विभागको निर्देशनबमोजिम डिजाइन पेस भइसकेको दाबी गरेको छ ।
सुरुमा डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्ज र पप्पु कन्स्ट्रक्सनबीच ७० सेमी चौडाइको पाइल १५ मिटर गाड्ने गरी बोर पाइल फाउन्डेसनको डिजाइनमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । सडक विभागले एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमार्फत बोर पाइल फाउन्डेसनको डिजाइन बनाएको थियो । निर्माणको बेलामा जमिनमुनि बालुवा र ग्राझेल बढी देखिएपछि पुनः डिजाइन गरिएको थियो । यसमा मल्टी ल्याब प्रालिले ७ मिटर चौडाइ र १० मिटर गहिराइको वेल फाउन्डेसको सिफारिससहित प्रतिवेदन दिएकोमा विभागले पुरानै डिजाइनमा निर्माण गर्न आदेश दिएको निर्माण कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
निर्माण कम्पनीका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुखले मल्टी ल्याबको रिपोर्टलाई स्वीकृतिको लागि सडक विभागमा पठाएकोमा विभागले अस्वीकार गरेको थियो । २०६५ सालमा एमईएच प्रालि, मल्टी र नेपेकोनले संयुक्त रूपमा गरेको डिजाइनमा समेत ७ मिटर चौडाइ र १७ मिटर गहिराइको वेल फाउन्डेसनको डिजाइन हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला सवा चार मिटर फराकिलो एकतर्फी पुलका लागि सो डिजाइन सिफारिस गरिएको थियो । तर, पुलको ठेक्काको सूचना निकाल्नुअघि एभरेस्टमार्फत डिजाइन परिवर्तन गरिएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कुवेती मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले ६ नयाँ अनुहारलाई समेट्दै इराकविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल र विश्वकप छनोटका बाँकी तीन खेलका लागि...